Madaxweynaha Koofur Galbeed oo baaq ka soo saaray xaalada Jubbaland - Home somali news leader
Home NEWS Madaxweynaha Koofur Galbeed oo baaq ka soo saaray xaalada Jubbaland
Madaxweynaha Koofur Galbeed oo baaq ka soo saaray xaalada Jubbaland
Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) oo xalay ka hadlayay munaasabadda sanad-guurada labaad ee ka soo wareegatay doorashadiisa ayaa farriin u diray Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
C/casiis Lafta Gareen ayaa sheegay in Madaxweyne Axmed Madoobe kala shaqeynayaan sidii Jubbaland ku soo noqon laheyd sideedii, dadka walaalaha ahna ay nabad ku wada noolaan lahaayeen.
“Waa kala shaqeynayaa nabadda iyo sidii Jubbaland teedi ku soo noqon laheyd, dadkaas walaalaha ahna nabad ku wada noolaan lahaayeen, uma baahna maanta dad walaala ah oo xabad isku ridaya oo la yihaado ciidan baa soo socda, intii hore nagu filan, waxaan jecelnahay inay nala qaadan doonaan, anaga reer Koofur Galbeed ahaan ayaa isku xilqaami doona.
Madaxweyne Lafta Gareen ayaa soo hadal qaaday khilaafka ka taagan doorashada iyo walaaca siyaasiyiinta iyo Musharaxiinta, waxaa uu sheegay inay mas’uuliyad iska saari doonaan sidii walaaca ay qabaan siyaasiyiinta loo xalin lahaa.
“Waxaa rabnaa inaan mas’uuliyad gooni iska saarno dhawaaqa iyo walaacii dadkii siyaasiyiinta ee xamar joogay ee cabashada ka qabay dorashooyinka una baahan in la isku qnaciyo la wada hadlo, waa tii aan horay u balanqaadnay waa u istaageynaa, waxa nagu muhiimsan waxay tahay sidii horay u ahaan jirtay inay dooarasho dhacdo si nabad ku dhacdo, waqtigeedana ku dhacdo ninka alle nasiibkiisa u qadaro uu Madaxweyne noqdo, marka doorashada meesha ay ka bilaaban jirtay qeylada oo la gaarin ayay qeylo bilaabatay waxaa jecelnahay inaan ayadana xalino”ayuu yiri Lafta Gareen.
Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa hadalkiisa u muuqday mid ka duwanaa hadaladii hore ka soo yeeray oo loo arkayay inuu dhinaca dowladda federaalka u janjeero, waxaana loo arkaa inuu door muuqdo ka qaadan karo arrimaha cakiran ee ka jira doorashada.
Previous articleDhaq dhaqaaqyo ciidan oo ka jira xuduuda Soomaaliya iyo Kenya
Next articleCar bombings in Kabul kill at least eight people, including children and women